“Lionel Messi waxa uu ii sheegay inaan afkeyga xiro” – Macallinka xulka qaranka Brazil Tite – Gool FM
“Lionel Messi waxa uu ii sheegay inaan afkeyga xiro” – Macallinka xulka qaranka Brazil Tite
(Riyadh) 16 Nof 2019. Tababaraha xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa shaaca ka qaaday in kabtanka xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi uu u sheegay inuu afkiisa xiro ama qabsado intii lagu guda jiray kulankii dhexmaray labada xul ee xafiiltama ee reer Koonfur Ameerika.
Messi ayaa dib uga soo laabtay kulankan saddex bilood oo uu ganaax kaga maqnaa xulkiisa qaranka, waxaana uu Argentina ku hoggaamiyey guul 1-0 oo ay ka gaareen Brazil, isaga ayaana goolkaas u dhaliyey xulkiisa daqiiqaddii 13-aad ciyaartii xalay ka dhacday Magaalada Riyadh.
Xiddiga xulka Argentina ee Messi ayaa xulkiisa qaranka ka maqnaa afartii kulan ee kan ka horreeyey, maadaama uu ganaax kala kulmay CONMEBOL markii uu ku eedeeyey inay guusha u hibeeyeen Brazil kuwaasoo ay wada ciyaarayeen afar dhammaadkii Copa America.
Messi iyo Tite ayaa isweydaarsaday ereyo qeybtii hore ee ciyaarta kulankii xalay, iyadoo xiddiga caanka ah ee Barcelona la arkay isagoo farihiisa ku dhajinaya Faruuryihiisa/bushimihiisa, iyadoo tababaraha reer Brazil uu u dacwooday garsooraha.
“Anigu waan cabtay, maxaa yeelay isagu [Messi] waxay ahayd in la siiyo kaarka Jaallaha, wuxuuna ii sheegay inaan afkeyga xiro aniguna waxaan u sheegay inuu afkiisa qabsado,” ayuu yiri Macallin Tite.
Tababare Tite ayaa hadalkiisa intaa ku daray: “Ma doonayo inaan Jawaab dambe ka bixiyo, waxaad u baahan tahay garsoore xoog leh, maxaa yeelay wuu laqsiin lahaa… waxay ahayd in kaar la siiyo, waana ku saxnaa inaan cabasho sameeyo.”
Goolkii uu Messi xalay ka dhaliyey Brazil kuwaasoo qaaday Copa America ayaa waxa uu ka dhigan yahay inaysan wax guul ah gaarin shan kulan oo xiriir ah.
Kooxda Man United oo qorsheysatay inay 200 milyan oo gini bisha Janaayo kula soo wareegto labo laacib oo da’yar ah